Dowladda Soomaaliya oo ka digtay qorshe Kenya iyo Jabuuti ka dhex wadaan shirka midowga Afrika | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Dowladda Soomaaliya oo ka digtay qorshe Kenya iyo Jabuuti ka dhex wadaan shirka midowga Afrika
Dowladda Soomaaliya ayaa ku eedeeysay Kenya iyo Jabuuti in ay wadaan olole diblumaasiyadeed oo ay guddiga midowga Afrika kaga dhaadhicinayaan in qodobo ay doonayaan lagu daro war murtiyeedka lagasoo saarayo shirkooda maanta.
Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dubbe oo goor dhowayd shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho, ayaa sheegay dowladda Soomaaliya in ay kasii digayso xogaha kasoo gaaraya qorshaha ay Kenya iyo Jabuuti wadaan.
“Dowladda Soomaaliya waxay ka digaysaa wax walba oo taabanaya gobanimada iyo madax bannaanideeda siyaasadeed. Waxaan kasoo horjeednaa dowladdo ay Soomaaliya kala dhexayso xurguf siyaasadeed in ay guddiga nabada midowga Afrika u adeegsadaan ku xad gudubka gobanimada Soomaaliya,” ayuu yiri wasiir Dubbe.
Wasiir Dubbe, ayaa sheegay dowladda Soomaaliya in aysan cidna ka aqbalayn ka xad gudubka arrimaha gudaha Soomaaliya, taasoo uu sheegay in ay kasoo horjeedo xeerarkii iyo sharciyada lagu aas aasay ururka midowga Afrika.
Wuxuu sheegay wasiirku in ay soo dhoweynayaan cid kaste oo dowladda gacan ka siinaysa qabsoomida doorasho xor iyo xalaal ah oo ay shacabku codkooda ku doortaan wakiiladdooda.
Hadalka wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa kusoo aadaya iyadoo galabta lagu wado in war murtiyeedka lagasoo saaro shirka guddiga nabadda iyo amniga midowga Afrika ee ka socda Addis Ababa.
Dowladda Soomaaliya oo ka digtay qorshe Kenya iyo Jabuuti ka dhex wadaan shirka midowga Afrika was last modified: April 22nd, 2021 by Admin
AKHRISO:-Cali Xaaji Warsame oo la wadaagay Wariyaal Sheeko iyo Shaah, hotelka Grand Indian Cuisine ee Magaalada Nayroobi.
Maleeshiyada Al-Shabaab oo Jab xooggan lagu gaarsiiyay weerar ka dhacay gobolka Baay
Abiy Ahmed oo loo dhaariyey Ra’iisal wasaaraha Itoobiya
Qowmiyada Tigreeda Itoobiya oo maanta u dareeray doorasho
Akhriso:-Qarax loo adeegsaday Gaari oo galabta ka dhacay Kismaayo